Rasaasa News – Qurbo Joogta W/galbeed Somalia oo Laga Joojiyeyey Banbax
on February 22, 2012 12:00 am
London, February 22, 2012 [ras] – War aanu ka helay London, ayaa sheegaya in Bilayska dalka Ingriisku ka joojiyeen qurba-joogta maamulka Somaliland banbax dhici lahaa 22/2/2012 oo ay ka horsamayn lahaayeen aqalka labarkiisu yahay 10 ee fadhiga u ah xukuumada Ingriiska [Number 10 Down Street].
Sida uu noo soo sheegay wariyaha noo jooga London, banbaxa kasta oo ka dhaca dalka Ingriiska waxaa fasax laga qaataa Bilayska. Waxaana hore loo sheegay in ay dhacayaan labo banbax oo aad u weyn oo ay kala samaynayeen Somali weyn iyo maamulka Ismahadiyey ee SNM, kaas oo kala dhici lahaa February 22, 23.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa mudo bil ah is uruursanayey qurba-joogta SNM, oo isaga kala yimid dalalka galbeedka oo dhan. Qoys walba oo degan London oo ka soo jeeda maamulka SNM, waxaa marti u ahaa ugu yaraan 5 ruux.
Booliska Ingriiska ayaa maanta soo saaray go,aan ay kaga joojinayaan qurbo-joogta SNM, banbax dhici lahaa bari. Waxaana loo sheegay in Somalida loo ogol yahay hal banbax oo ah 23/2/2012, kaas oo ay Bilaysku sheegeen in ay siiyeen warqad fasax ah.
Waxay Bilaysku sheegeen in ayna jirin labo dal oo Somali ah, laakiin uu jir hal dal oo Somali ah, cid aan calan la aqoonsan yahay wadanina fasax ma siin karo ee la banabax Somalida. Arinkan wuxuu qaban doonaa Jwxo-shiil.
Arinkan oo niyad jab weyn ku keenay taageerayaasha SNM, oo mudo bil ah samaynayey looxaan lagu aslay erayo lagu qaybinayo dalka Somaliya.
Waxaa la isweydiin karaa maamulka SNM, oo sanooyin badan ku hogaaminayey wareer shacabka w/galbeed Somaliya ma ku wacyi qaadan sida farsamada Ingriisku wax uugu sheegay.